एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य समायोजनमा पछि हट्यो नेप्से ! - Everest Dainik - News from Nepal
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य समायोजनमा पछि हट्यो नेप्से !
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्यमा गरेको समायोजन फिर्ता लिएको छ । संस्थापक हकप्रदलाई साधारण शेयरको मूल्यमा समायोजन गरेको भन्दै चौतर्फी दवाब आएपछि नेप्सेले यस अघि गरेको निर्णय फिर्ता लिएको हो । योसँगै शेयर मूल्य समायोजन पछि भएका कारोबारहरु रद्द भएका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको साधारण शेयरको मूल्यमा १०५ प्रतिशत संस्थापक हकप्रदलाई समायोजन गरेको थियो । नेपालको पूँजी बजारमा पहिलो पटक निष्काशन हुन लागेको सन्दर्भमा फरक किसिमको शेयरलाई अर्कै शेयरमा गरिएको समायोजन व्यवहारिक थिएन ।
याे पनि पढ्नुस थला पर्‍यो परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान
नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज भने मूल्य समायोजनबाट पछि हट्दा लगानीकर्ता शसंकित बनेका छन् । चाहेको बेलामा कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्ने अनि बिरोध सुरु भए पछि तत्काल पछि हट्ने कृयाकलापले नेप्सेको कृयाकलापमा लगानीकर्ताहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
मेरोलगानीसँग कुरा गर्दै एक जना लगानीकर्ताले भने, ‘गर्नुपर्ने के हो ? भन्ने नबुझी हचुवाको भरमा नेप्सेले निर्णय गर्ने गरेको प्रष्ट भयो । कम्तीमा फ्रण्टलाइन रेगुलेटरले गर्नु पर्ने निर्णय उचित हुनु पथ्र्यो, ताकि अहिले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । आगामी दिनमा पनि नेप्सेले गर्ने हरेक निर्णयमा सहजै प्रश्न खडा गर्ने ठाउ बनेको छ ।’
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि बाधा : ओली
नेप्सेको निर्णयका कारण केही दिन लगानीकर्ता समस्यामा समेत परे । त्यतिमात्र नभई मूल्य समायोजन पश्चात शेयर किन्नेहरु पनि नेप्सेको गलत निर्णयका कारण मारमा परेका छन् । मूल्य समायोजन होस् वा कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नु पहिले पर्याप्त गृहकार्य र छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा नेप्से पुगेको भान भएको छ । मेरोलगानीबाट